Badbaadinta Caafimaadka, Daryeelka Fayodhowrka Saxarada, Saxarada, Wax soo saarka Farmasiga - ORIENT
Taxanaha Badbaadada Caafimaadka
Taxanaha Daryeelka Fayodhowrka Saxarada
Farta oximeter-ka farta
Qalabka cadaadiska dhiigga
Mitirka gulukoosta dhiigga
Taxanaha Imtixaanka Haweenka
Maaskarada wajiga la tuuri karo, goonooyinka difaaca, gaashaanka wajiga, gacmo gashiyada, muraayadaha wax difaaca, FFP2 maaskaro wajiga, Dhar aan tolmo lahayn, Dharka wax lagu daboolo ee kabaha, Nadiifiyaha Gacanta isla markiiba iyo wixii la mid ah.
eeg adeegyadayada +
Kormeerka cadaadiska dhiigga, mitirka gulukoosta dhiigga, astaamaha mitirka farta, heerkulbeegga infrared, Mesh nebulizer, Aneroid Sphygmomanometer, Stethoscope, Saabuunta wax lagu shubo iyo wixii la mid ah. "
Sirinji la tuuri karo, sirinji horay loo soo buuxiyey, qalliin qalliin, xarig dhiig ah, taxane qalliin oo noocyo kala duwan ah, qalab qalliin oo kala duwan, qalabka qalliinka, dhaawaca nabarka, bacda ostomy, labiska caafimaadka iyo wixii la mid ah.
Koobka kaadida, saxanka petri, koob muunad ah, tuubada dhiigga ee faakiyuumka ah, weelka muunada, tuubada tijaabada, xirmada ururinta muunada Virus-ka iyo wixii la mid ah. "
Iibinta Caafimaadka iyo Badeecada Caafimaadka
3 weji waji loo tuuro oo ah nooca I, Nooca ...
Xirfadlayaal Caafimaad oo La Tuuri Karo ...
Xirmada muunad qaadista fayraska ORIENTMED
Maaskarada wejiga FFP2 ee leh CE ISO FDA
Dharka go'doominta PE ee la iska tuuri karo
2019-nCoV IgG / IgM Combo Card Kaarka
KHUDBAD 5 lakab oo la tuuri karo KN95 wejiga mas ...
Koofiyad kooxeed oo la tuuri karo
Muraayadaha badbaadada caafimaadka
Gawaarida Caafimaadka nitrile / PVC
Daboolka kabaha difaaca ee la iska tuuri karo
SARIIR AH ORT3010 ICU Ventilator
ORIENTMED waxaa la aasaasay 1991. Waxaan nahay shirkad xirfadlayaal ah oo inta badan ku howlan wax soo saarka caafimaadka. Iyada oo ku saleysan tayada wanaagsan iyo qiimaha macquulka ah, waxaan ku guuleysanay sumcad mas'uul ka ah degmooyin badan oo kala duwan, sida Jarmalka, Faransiiska, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, Koonfur Afrika, Mareykanka iyo wixii la mid ah.
Waxaan diiradda saareynay habka tayada sare leh iyo wax soo saarka badeecadeena tan iyo bilowgii aasaasida xiriirka ganacsi ee aan la leenahay macaamiisheenna adduunka. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku guuleysano si aan u wanaajino adeegeena waxaana rajeyneynaa inaan la dhisno xiriir la isku halleyn karo macaamiil badan oo ka tirsan laynka caafimaadka la iska tuuri karo mustaqbalka dhow.
Alaabada Caafimaadka iyo Caafimaadka
Heerkulbeeg Dijitaal ah oo Caafimaad Infrared infarared
ORIENTMED 812B Mesh nebulizer oo leh CE ISO iyo FDA
WT01 METER GLUCOSE METER
Hal xabbo oo bac bacda hydrocolloid la tuuro ah
LCD wuxuu soo bandhigayaa heerkulbeegga bukaan-socodka ee dhijitaalka ah
50D GARGAARKA SPHYGMOMANOMETER
Lancet Badbaadada Taabashada-jilicsan ee ORIENTMED
Xiritaanka dhaawaca qalliinka caafimaadka
Heerkulbeegga aan caafimaadka lahayn ee Meerkuriga ah
Qalliinka caafimaadka ee cajaladda 'PE' oo la neefsan karo
80A FAR FUTO XADDHEX DHEER
ORT575 Nooca gacanta sare kormeeraha cadaadiska dhiigga
CUDURKA CAAFIMAADKA LAGU SAMEEYO INSULIN SYRINGE
Dharka Dhaawaca Hydrocolloid
Waaxdaada horumarinta alaabtaada
Waxaan diiradda saareynay habka tayada sare leh iyo wax soo saarka badeecadeena tan iyo bilowgii aasaasida xiriirka ganacsi ee aan la leenahay macaamiisheenna adduunka.
Bakhaarkaaga iyo Xoog ka dib iibinta adeegga
(Dabagal joogto ah oo si dhakhso leh uga jawaab)
(In ka badan 20 sano oo arimahan ah, waxaan ka buuxan khibrad)
(360 ° VR Video, Video, Video chat 1. Tallaabooyinka Soo-celinta Jawaab-celinta 2. Kormeerka kahor rarka 3. Kormeerka warshaddaada cusub)
(Hubi in tafaasiil kasta iyo sawir adiga kuu ah)
Waaxdaada Horumarinta Ganacsiga
(Talooyinka suuq-geynta, Calaamadaha, Diiwaanka)
Ku soo dhowow nala soo xiriir!
GARGAARKA DALBADKA 'OBEENT' & dhoofinta CO., LTD
Telefoonka: 0086 13315125256
Taariikhda galoofyada caafimaadka lagu tuuri karo
1. Taariikhda asalka gacmo gashi la tuuro 1889kii, labada gacmood ee ugu horeeya ee gacmo gashi la tuuro wuxuu ku dhashay rugta caafimaadka ee Dr. William Stewart Halstead. Marka lagu jiro qalliinka, galoofyada la tuuri karo ma xaqiijin karto oo keliya dabacsanaanta gacanta dhakhtarka, laakiin sidoo kale waxay si weyn kor ugu qaadaysaa caafimaadka nadaafadda deegaanka caafimaadka. Gacmo gashiyo la tuuri karo oo ku jira dhakhtarka qalliinka ee kooxdan ayaa si ballaaran caan u ah. In tijaabo caafimaad muddo-dheer ah, galoofisyada la tuuri karo ayaa sidoo kale lagu ogaaday inay leeyihiin f ...
sida loo isticmaalo qalabka wax lagu shubo
Sidee loo isticmaalaa lanjetyada dhiigga loo yaqaan Press Press? Hadda maalmahanba dad aad iyo aad ayaa fiiro gaar ah u leh caafimaadkooda waxayna aadaan xarunta caafimaadka si caafimaadkooda looga siiyo iskaan buuxa. Sababtaas awgeed baahida loo qabo cirbadda dhiigga ayaa 3 jeer ka badan sidii hore. Sida loo isticmaalo manjarka dhiigga ayaa noqday mid aad muhiim u ah. Sida loo isticmaalo dheecaanka dhiigga si tartiib tartiib ah ayaa marba marka ka sii dambeysa muhiim u ah. Haatan aan baranno sida loo isticmaalo nooc ka mid ah saxaafadda oo loo yaqaan 'lancet'. Sida loo isticmaalo Tallaabada 1aad ee Qalabka Dhiig-baxa